कविता-के हुन्थ्यो ?
Fri, Apr 20, 2018 | 12:48:44 NST
09:44 AM ( 1 year ago )
के हुन्थ्यो ?
-उस्ताद सुदर्शन राजोपाध्याय्
मानवको पेटमा गेट भइदिएको भए के हुन्थ्यो ?
कुनैपनि बेला खानाखानु अगाडि गेट खोल्नु पथ्र्यो ।
हेर्ने आँखा मुहारमा नभइदिएको भए के हुन्थ्यो ?
सबैलाई अन्धो शब्दबाट बोलाइन्थ्यो ।
हिँड्ने खुट्टा शरीरमा नभइदिएको भए के हुन्थ्यो ?
सबैलाई एउटै शब्द लङ्गडोबाट चिनिन्थ्यो ।
संसारमा खानेकुराको अभाव भइदियो भने के हुन्थ्यो ?
संसारभरि अनिकाल फैलिन्थ्यो ।
संसारभरि गाडी नै नभइदिएको भए के हुन्थ्यो ?
सबै समानतामा गनिन्थ्यो ।
संसारमा हवाईजहाज नभइ दिएको भए के हुन्थ्यो ?
नेताहरुले विदेशमा बैंकखाता खोल्न हिम्मत गर्दैनथ्यो ।
संसारमा स्वानीमानिस नै नभइ दिएको भए के हुन्थ्यो ?
पुरुषहरुले संसारलाई नै बाईबाई गर्थ्यो ।
संसारमा भाषानै नभइदिएको भए के हुन्थ्यो ?
संसारमा सांकेतिक भाषाले स्थान पाउँथ्यो ।
संसारमा जनावरहरु नभइदिएको भए के हुन्थ्यो ?
सबै मानवहरु शाकाहारी हुन्थ्यो ।